त्यहाँ मात्र आफ्नै भविष्य थाहा सक्दैन, जो को तर पनि विभिन्न समस्याहरूको समाधान खोज्न भाग्य भविष्यवाणी लागि धेरै विधिहरू छन्। एक व्यक्ति जोगिन सक्छौं वा नकारात्मक परिस्थिति, छैन अरूको इन्साफ मा छल्न गर्न रोक्न को लागि, र आफ्नो जीवन एक सानो राम्रो बनाउन यो प्रतीक्षा छ सिक्ने। सबै भन्दा लोकप्रिय प्रेतविद्यासम्बन्धी को प्रकारको Tarot कार्ड को decomposed डेक मानिन्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक यो सबै स्थिति, पङ्क्तिबद्ध र आसन्न कार्ड मा निर्भर गर्दछ, धेरै व्याख्याहरु छ।
तरवार को विवरण कार्ड ऐस
साधारणतया यो कार्ड बादल बाहिर आउने हात चित्रण गरिएको छ। यो विशाल तरवार खडा संकुचित छ। को हतियार संलग्न मुकुट को किनारा मा, जैतून र पाम शाखा संग सजाया। पृष्ठभूमिमा हिमालहरू देखाउँछ। यो कार्ड सेना को विचार को विजय को epitome प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो आत्मा र इच्छा, शारीरिक बल, अख्तियार र शक्ति को शक्ति प्रर्दशन गर्दछ।
मूल्य कार्ड सोझो
सामान्य हात भने, कार्ड तरवार को ऐस (Taro) स्पष्टता र विरोधाभास को अभाव झल्काउँछ कि मान छ, ठीक छ। त्यो सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भन्छन्। यो कार्ड स्थिति को ज्ञान बताइएको, यो विवरण को elucidation र कदम अर्को के गर्न आवश्यक के को समझ दिन्छ। साथै, यो रहस्यमय एक व्यक्ति तुरून्त सामना गर्न र यसलाई भयो किन बुझ्न छ जसमा अवस्था clarifies।
यो पनि यो कार्ड एउटा नयाँ परिवारको सदस्य को जन्म, वा विचार को उद्भव हेराल्ड सक्ने उल्लेख गर्नुपर्छ। कुनै पनि मामला मा, घटना राम्ररी र पूर्ण सोच पक्कै कसैले जीवन परिवर्तन। यो त्यहाँ एक परिदृश्य थियो भने, कार्ड चाँडै अप्रत्याशित घटनाहरू हुनेछ भन्ने हो।
एक उल्टो स्थिति lasso अर्थ
तरवार कार्ड को उल्टाउन ऐस (Tarot): को lasso को स्थिति को प्रत्यक्ष विपरीत को मान। यो कार्ड प्रेतविद्यासम्बन्धी फसे भने, त्यसपछि मानव गर्भधारण योजना अनुवाद मा चुनौतीहरू सामना, उद्देश्य छैन हासिल गर्न सकिन्छ, वा हासिल गर्नेछ तिनीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। साथै, कार्ड सफलता को भन्ने आशा अर्थहीन, मृत-अन्त, र वही मुसीबत हुन सक्छ रिपोर्ट गर्न सक्षम छ। हामी घटनाहरू को स्तर विचार भने, lasso मूल्य घरेलू quarrels बारेमा बोल्छ, सिक्ने प्रक्रियामा कठिनाइ, कठिन अवस्था बाहिर समाधान र तरिका को अभाव, यो असम्भव समस्या सामना गर्न छ। साथै, कार्ड सफलता को कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यो लक्ष्य प्राप्त को नतिजा धेरै खराब कुरा परिणत हुनेछ। को भनाइ जान्छ, यो मामला मा खेल मात्र यो लायक छ, तर पनि हानि र व्यक्ति अनुमान आफ्नो सफलता पछुताउनु सक्छ ल्याए।
पङ्क्तिबद्ध क्यारियर, सोझो स्थिति lasso
यो परिदृश्य मा, जूनियर lasso एक सीधा स्थिति परे। यस मामला मा तरवार को ऐस (Taro) सबैभन्दा सकारात्मक मूल्य छ भन्न आवश्यक छ। राम्रो व्यापार पोख्त छ व्यक्ति खम्बा छ र के निर्णय दिइएको अवस्थामा सेवन गर्नुपर्छ के बुझ्नुहुन्छ। साथै, उहाँले चाँडै संकट अवस्था नेभिगेट गर्न र चाँडै यो हुन सक्छ कसरी जटिल कुरा यो nuance समाधान गर्न सक्षम छ। यो कार्ड तीव्रता र अलग प्रतीक, त्यसैले यसलाई consciously र जानाजानी अर्को काम गर्न जाने एक कल रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। साथै, नक्सा राम्रो विश्लेषणात्मक कौशल, नयाँ परियोजनाहरूको विकास मा सफलता, काम अगाडि मा रोचक विचार र समाधान बारे देखाउँछ।
तरवार को उल्टो कार्ड ऐस (Tarot): गाढा काममा मान
सामान्य परिदृश्य छ रूपमा, कार्ड उल्टो स्थिति विपरीत अर्थ छ। अर्को शब्दमा, पेसा लागि परिदृश्य, यो कार्ड उल्टो पतन भने, यो मतलब व्यावसायिक र व्यापार परियोजनाहरू एक विफलता बन्न सक्छ, र नयाँ पहल एक बरु प्रतिकूल परिस्थितिमा सँगसँगै हुनेछ। शायद निर्माण योजना बरु छोटो-sighted छन्, र नयाँ परियोजनाहरू संदिग्ध छन्। पहिले नै निष्कर्षमा अनुबंध भङ्ग गर्न सकिन्छ, र तपाईं कर्मचारीहरु र व्यापार साझेदार द्वारा विश्वासघात आशा गर्न सक्छौं।
सोझो मानिसको स्थिति मा स्वास्थ्य कार्ड Guessing
एक व्यक्ति बिरामी छ र उहाँले पुन: प्राप्त गर्न सोच थियो भने, त्यसपछि तरवार को ऐस Tarot कार्डहरू एक सीधा स्थिति गिर, को मूल्य अनुमान कसैले को स्वास्थ्य मा सकारात्मक गतिशीलता छ। अर्को शब्दमा, आफ्नो अवस्था सुधार छ, र यो प्रक्रिया मात्र सकारात्मक विकास हुनेछ। तर, यो एक व्यक्ति आफैलाई कटौती वा घरेलू स्तर मा सानो चोट लागेको प्राप्त गर्न सक्छन् सम्भव छ।
प्रेतविद्यासम्बन्धी स्वास्थ्य मा उल्टाउन
यो कार्ड उल्टो पतन भने, यसको मूल्य नकारात्मक छ। यसलाई सर्जिकल हस्तक्षेप लागि आवश्यकता portends। यस मामला मा, त्यहाँ कारोबार सफल हुनेछ भन्ने कुनै आश्वासन छ। यसलाई त्यहाँ उपचार पछि जटिलताहरू हुनेछ सम्भव छ। यो कार्ड पङ्क्तिबद्ध गरेको कसको व्यक्ति को स्वास्थ्य को स्थिति को नकारात्मक गतिशीलता छ।
तरवार Tarot कार्ड को प्रत्यक्ष स्थिति ऐस, प्रेमको मूल्य
प्रेतविद्यासम्बन्धी प्रेमले मामिलामा र मान्छे बीच सम्बन्ध भनेर भन्नुहोस्, एक सीधा स्थिति पतन जो तरवार को ऐस, निकट भविष्यमा गम्भीर छलफल को संभावना संकेत गर्छ। यो कार्ड चाँडै सम्बन्ध अझ स्वतन्त्रता हुन र लामो लुकाइएको छ कि समस्या हटाउन र दुवै मान्छे मा नकारात्मक प्रभाव को गहिराइमा देखि हुनेछ मतलब सकेन। को सरसृप व्यक्ति संग समझ छ भने, यो छोटो समयमा उहाँले उसलाई साधारण भाषा पाउनुहुनेछ convergence र नेटवर्किंग लागि सही दृष्टिकोण पाउन सक्षम हुनेछ सम्भव छ। यसलाई ध्यानमा सार्ने गर्नुपर्छ भन्ने तरवार को ऐस प्रेतविद्यासम्बन्धी मा (Tarot) मूल्य एक सम्बन्धमा निर्णय बनाउने मा स्पष्टता र sobriety - एकदम प्रतीकात्मक छ। तसर्थ, सम्बन्ध illusions र झूट मा बनाइएको थियो भने, त्यसपछि चाँडै प्रकट हुनेछ, र संघ समाप्त हुन सक्छ।
हामी घटनाहरू विचार भने, कि फांसी दिन चाँडै पहिल्यै लिइएको स्थान वा चाँडै हुनेछ छ जो ब्रेक पछि नयाँ प्रेमी को उद्भव मतलब सकेन।
मायालु हात मा कट्टर उल्टा,
हातमा, प्रेम र सम्बन्ध मा, यो रहस्यमय उल्टो पतन भने, त्यसपछि हामी हुन तरवार नकारात्मक मूल्य Tarot कार्ड ऐस छ। यस मामला मा Tarot कार्ड को व्याख्या निम्नानुसार छ: सामान्यतया यो एक लामो र unemotional quarrels वार्ता, सायद, कसैले आफ्नो अपमान, क्रोधित आयोजित। तर यो अवस्था समाधान मात्र बढ्छ सम्बन्ध मा नकारात्मक फेला छैन, र यो समस्या समाधान गर्न कुनै संभावना छ। साथै, कार्ड सम्बन्ध को जटिलता र कठिनाई औंल्याउँदै अत्यधिक खरापन र घोटाले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
तरवार को ऐस, व्यक्तित्व मा गाढा मा व्याख्या
यो रहस्यमय मार्फत व्यक्ति को व्यक्तित्व विशेषताहरु निर्धारण भने, त्यसपछि यसलाई आध्यात्मिक बल, अनुशासन, उत्कृष्ट भौतिक विशेषताहरु को उपस्थिति रिपोर्ट। तर यो मानिस, जो को खुलासा तरवार, एकदम आवेगशील र पिन्चे एक प्रत्यक्ष स्थिति ऐस मा व्यक्त गरिएको छ। पासोमा नपर्नुहोस् विपरीत पतन भने, एक उल्टो स्थिति, यो जसको अनुमान मा व्यक्ति धेरै क्रूर र अन्यायपूर्ण छ भन्ने हो, यो भित्र सबै भावनाहरू भण्डारण गर्न प्रयोग गरिएको छ।
यसको प्रतीकात्मक रूप व्याख्या को सद्गुण द्वारा, दिन कार्ड रूपमा प्रेतविद्यासम्बन्धी संग को तरवार को Tarot कार्ड ऐस अर्थ नयाँ शानदार विचार बारेमा बताउँछ। तिनीहरूले पुरानो समस्या समाधान वा जटिल पुरानो अवस्था बुझ्न मदत गर्न सक्षम छन्। जब यो कार्ड मात्र मुद्दा को सार बुझ्न, तर पनि पङ्क्तिबद्ध गरेको कसको व्यक्ति लागि अधिकतम लाभ संग बुद्धिमानी समाधान खोज्न मद्दत गर्छ।
बिजुली ओवन भान्सा: प्राविधिक विशेषताहरु र व्यवस्थापन प्रकार
विशेष गरी स्वादिष्ट चिया बिस्कुट
बालुवा बालुवाको ढिस्को। यस बालुवाको ढिस्को के छ र मरुभूमि को जीवन मा आफ्नो भूमिका के हो?
रोमाञ्चक "बर्न सर्वोच्चता": अभिनेता, भूमिकाको, षड्यन्त्र,
प्लान्ट समुदाय - यो के हो? फारामहरू र बोट समुदाय को प्रकार